TM WhatsApp Apk Download Ho an'ny Android [Nohavaozina 2022] - Luso Gamer
TM WhatsApp Apk Download ho an'ny Android [Nohavaozina 2022]
March 31, 2022 Janoary 18, 2022 by Làlana Shweta
Raha leo amin'ny fetra sy fameperana apetraky ny WhatsApp ianao dia manana vaovao tsara ho anao aho. Satria ato amin'ity lahatsoratra ity dia nizara App izay fantatra amin'ny anarana hoe "TM WhatsApp Apk" aho ?? ho an'ny Android.
Inona ny atao hoe WhatsApp WhatsApp apk
Azonao atao ny misintona ny rakitra Apk an'io fampiharana io avy amin'ity lahatsoratra ity Taty aoriana, afaka mametraka izany amin'ny telefaona finday ianao rehefa avy nanaisotra ny App Messenger voalohany. tsy fampiharana hafatra tsotra fotsiny ho an'ny Android izany fa manolotra endri-javatra marobe.
Tsy ho azonao ireo zavatra rehetra ireo ao amin'ny fampiharana tany am-boalohany, manoro hevitra anao aho hampiasa izany farafahakeliny. Avy eo dia tianao ny fomba fahitana azy sy ny fomba fiasa ao. Misy lohahevitra maimaim-poana misy azonao ampiharina amin'ny irakao manontolo izay manova ny fijery ankapobeny.
Ny tena izy Mod Application dia natomboka tamin'ny 2010 ho an'ny finday Android, izay vokatra ofisialin'ny WhatsApp Inc. Ny tompon'ny vokatra ofisialy dia Mark Zuckerberg ary izy ihany koa no tale jeneralin'ny Facebook sy Instagram.
Na izany aza, ny fampiharana izay resahantsika amin'ity lahatsoratra ity dia tsy vokatra ofisialy an'ny orinasa.
Ankoatr'izay dia dikan-dikan-tsindron'ny App na azonao antsoina hoe Mod App. raha mampiasa ilay iraka tany am-boalohany ianao dia ho nanaporofo fa be dia be ny famerana ny fampiasana azy.
Raha tsy afaka mandefa hafatra amin'ny fifandraisana mihoatra ny 5 ianao indray mandeha na tsy afaka mandefa horonantsary misy habe mihoatra ny 16 MB ianao. Ankoatr'izay, be dia be ny fetra ary tsy hanana lohahevitra maro azo ampiharina ianao.
anarana TM WhatsApp
Momba ny WhatsApp WhatsApp
Raha ao amin'ny TM WhatsApp Apk ianao dia hanana endri-javatra tsy manam-petra miaraka amin'ny fampanofana maro be ianao. Ohatra, azonao atao ny manova ny safidin'ny endri-tsoratra, manidy ny rindranasao sns ... dia mamela ny mpampiasa azy hanova ny fiteny ho an'ilay tiany.
Talohan'izay dia tsy misy safidy toy izany hamerina ny data rehetra amin'ny telefaona. Saingy izao dia manana safidy ny mpampiasa mba hamerenany amin'ny laoniny ny hira sy ny fifandraisan'izy ireo ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Mba hamoronana backup, tsy maintsy manome Gmail Id ianao avy eo avela hamerina.
Raha mampiasa dikan-teny tranainy ianao dia afaka mampiasa koa ny safidy havaozina naorina mba hampivoarana ireo endri-javatra. Tsy misy ny endri-javatra miafina tsy voaloa dia maimaim-poana avokoa ary afaka mankafy azy izay tadiavinao.
Raha mampiasa amin'ny alina ianao dia mila manana modely maizina na maizina amin'izy ireo. Noho izany, afaka manavao ny maody lohahevitra maizina ianao amin'ny alàlan'ny fidirana am-panaovana fampiharana.
Key Features amin'ny Tm Whatsapp App
Misy zavatra marobe izay tsy azonao eritreretina akory fa mila mandinika azy ireo irery ianao. Satria ny ankamaroan'ny endri-javatra sy ny safidy dia azo haverina ka hatramin'ny ary raha tsy hoe tsy mametraka ianao dia tsy hahazo izany safidy izany.
Toy izany dia tsy maintsy ampanjifanao ireo safidy fizarana haino aman-jery mba hampiakatra ny fetra ny haben'ny horonantsary alefanao sy zavatra hafa. Na izany aza, hijery ny endri-javatra eto ambany ianao izay hanampy anao hahalala hoe inona ny tianao haleha.
Azonao atao ny mitazona hafatra valiny Auto-na ka rehefa misy olona mandefa hafatra anao dia handefa hafatra ho azy ireo ny Appo (azonao atao ny mamorona hafatra araka ny safidinao).
Makà vaovao farany sy ho avy rehetra.
Lohahevitra 50 mahery azo ampiharina amin'ny mpitondra hafatra WhatsApp.
Azonao atao ihany koa ny misintona lohahevitra taonina.
Ovay ny fiteny.
Afaka manana safidy mahaliana endri-tsoratra ianao hanova azy ireo amin'izay tianao.
Avereno ny hafatrao.
Hanova ny fijerin'ny fifandraisana sy ny haben'ny DP sy ny fomba.
Betsaka ny Anti-Code anti miampy ny dikan-dresaka ankehitriny amin'ny ho avy.
Misy taonina maro emojis sy stickers izay tsy hita ao amin'ny fampiharana ofisialy.
Afaka manafina vondrona sy hafatra ianao.
Izany dia ahafahanao manova ny horonan-tsary amin'ny GIF.
Ankehitriny dia mamela anao hamaky ny anaran'ny mpandray anjara amin'ny vondrona.
Ampitomboy ny haben'ny horonantsary arakaraky ny 14 MB mankany 100 MB.
Ary maro hafa no hiaina ao amin'ny TM WhatsApp Apk.
Azonao atao koa ny manandrana ireto manaraka Mod Mod Whatsapp
Whatsapp Anti voarara apk
Ity no vaovao farany sy vaovao amin'ny App azonao alaina amin'ny telefaona anao. Na izany aza, misy fampitam-baovao nampiana ireo vaovao. Efa voatanisa eto ambany ireto fanavaozana ireto.
Napetraka ny filaminana ho an'ny CVE-2019-3568.
Azonao atao ny milalao hafatra amin'ny alàlan'ny feo tsy misy tsindrio ny bokotra milalao amin'ny hafatra an-tsoratra tsirairay.
Ireo baoty dia raikitra.
Nohamafisina ny fampisehoana.
Raha te hanana Application Application maimaim-poana sy tsy misy fetra ianao dia io no safidy tsara indrindra ho anao. Tokony hotadidinao izao fa tsy fampiharana ofisialy na ara-dalàna io.
Satria ho Mod Apk izany, raha mahaliana anao ny Download ny kaontin'ny TM WhatsApp Apk ho an'ny Android. Tsindrio ny bokotra Download eto ambany.
Sokajy Fifandraisana, Apps Tags Sintomy Tm Whatsapp, Mod App, TM WhatsApp, TM WhatsApp Apk, App WhatsApp WhatsApp, TmWhatsapp Post Fikarohana
IMEI Changer Pro Apk Download 2022 ho an'ny Android [Pro miasa]
DTH Live Tv Apk ho an'ny Android [Vaovao farany 2022]